Sales Promoter ကျား ( ၅ ) ဦး - VSK International Co.,Ltd. at Good Brothers' Co., Ltd | MyJobs
/ Sales Promoter ကျား ( ၅ ) ဦး - VSK International Co.,Ltd.
Sales Promoter ကျား ( ၅ ) ဦး - VSK International Co.,Ltd.
ဆယ်တန်းအောင် (သို့) ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။
အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၂၈) နှစ် ကြားဖြစ်ရမည်။
ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး Communication Skill ကောင်းမွန်ရမည်။
Electronic ပစ္စည်းအရောင်းပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်း တာဝန်ကျရာနေရာတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အတွေ့အကြုံရှိပြီ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
အနည်းဆုံး (၂) နှစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။